विदेशी पर्यटकका लागि मलेसिया जनवरी १ देखि खुल्ने, हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा ! - jagritikhabar.com
विदेशी पर्यटकका लागि मलेसिया जनवरी १ देखि खुल्ने, हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा !
मलेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि जनवरी १ देखि बोर्डर खुला गर्ने भएको छ । कोरोना सङ्क्र’मण रो’कथामका लागि लगाएको प्रतिब’न्ध खुकुलो बनाउँदै मलेसियाले १ जनवरी २०२२ देखि विदेशी पर्यट’कका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर खुला गर्ने खबर द स्टा’रले लेखेको छ ।
को’रोना महामा’री रोकथामका लागि लगाइएको प्रतिब’न्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिब’न्ध लगाउँदा त्यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको मलेसियाको ठहर छ । पर्यटक क्षेत्र एकदमै सुस्ताएको भन्दै यसलाई अघि बढाउन मलेसियाले विभिन्न मापद’ण्डसहित पर्यटकका लागि खुला गर्न लागिएको खबरमा उल्लेख छ ।
को’रोना सङ्क्र’मण दर घट्दै जाँदा खाडीका देशहरूले पनि को’रोना सङ्क्र’मण रोकथा’मका लागि लगाएको प्रतिब’न्ध खुकुलो बनाउँदै लगेका छन् । महा’मा’रीपछि पर्यटकका लागि मलेसियाले आफ्नो बोर्डर खुला गर्ने निर्णय गरे पनि विदेशी कामदार लिनेबारे भने मलेसियाले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।